"Cosmonaut Gagarin" (isikebhe): Cruises, apholile, izibuyekezo nezithombe
Summer samaholidi, futhi namuhla sifuna ukukhathalela cruise, okuyinto umema "Cosmonaut Gagarin". Lo mkhumbi motor lakhiwa eJalimane futhi olwesimanje ngo-2005 no-2008. A ukhululekile, ezintathu-emphemeni liner lapho uqala nje ukubona captivates wabuka yayo ngaphandle kwenkinga. Yakhiwa kudala ngo-1958. Ekuqaleni, ngasendleleni, liner laqanjwa ngokuthi i- "eCaucasus". Uma uhlela ukuthatha uhambo, ake sihlolisise, kuyini nokuthi "Cosmonaut Gagarin". Lo mkhumbi motor has induduzo okusezingeni eliphezulu gumbi, ngoba ayesithanda kakhulu izivakashi.
Emakethe namuhla kukhona inqwaba tour opharetha abakulungele sihlinzeke izinhlelo zabo. Kusukela choice incike izinga lokuphumula, ngakho-ke sincoma ukuba yasithatha ngokungathí sina. Uma ungabaza, ayeke at inkampani, okuyiqembu Izibuyekezo emihle kakhulu. Izivakashi weneliseka izinga ezihlinzekwa "Cosmonaut Gagarin" (umkhumbi). "Infoflot" uhlela emfuleni Cruises kusukela 2003. Lunye ikuvumela ukuba ngcono ikhwalithi abasebenzi umsebenzi wenkampani emahhovisi kanye nokunakekela izivakashi ebhodini. Ukubuyekeza ngamunye uyakucabangela eholela ukuthuthukiswa inkampani kanye ngcono amasevisi anikezwa.
Likhono liner - abagibeli 190. Izivakashi kukhona zokudlela ezimbili. Omunye kwi emphemeni isikebhe yokuhlala abantu 70, kanye neziyisihlanu lincane, izihlalo 50. Nazi ikamelo umculo yaseshashalazini movie, Karaoke bar kanye sokuqasha, ikamelo wezokwelapha kanye solarium.
Ngokuthakazelisayo ibanga elide, lapho kwaba "Cosmonaut Gagarin". Intuthu-umkhumbi waba ngowokuqala owenze uhambo "2 1". Njengoba lo mkhuba ejwayelekile. Liner elisukela eMoscow, lapho ngifika Petersburg ngeke ukuhamba isikebhe Helsinki (Finland) - Stockholm (Sweden).
Lapha ezibekwe kumakhabheni owakhiwe kuphela, okusho ukuthi uzokwazi ukuba baphumule ngokuthula. By the way, ezinhle umsindo ukwahlukanisa udumo izivakashi "Cosmonaut Gagarin". Lo mkhumbi motor sesithuthukisiwe ke ukuhlangabezana nezidingo zabantu abahamba ku cruise eside. Phela, ebhodini ungachitha kufikela kuzinsuku ezingu-20.
Wi-Fi umkhumbi "Cosmonaut Yuri Gagarin" isebenza ngaphandle kokuphazamiseka, kulula kanjalo ukuthatha ukubhukuda laptop ne-tablet. Izitolo kagesi zikhona yonke indawo. Njengoba sishilo, kwi emphemeni aphansi kukhona kumakhabheni nazo zonke Izinsiza. Ngamunye wabo ifakwe yokugeza, eshaweni kanye yangasese. Apholile Ngineenyoni futhi izingubo zokugqoka, esiqandisini futhi umsakazo, kanye amafasitela. Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo zezivakashi, zingabantu amancane, kodwa ethokomele kakhulu.
On the ephansi emphemeni kumakhabheni kuhluke kuphela isibalo izivakashi yokuhlala. Ngakho, egumbini kuyoba eyodwa noma ezimbili imibhede olulodwa, noma kungase zihlanganisa isikhala eyengeziwe.
Okokuqala izivakashi yokubhuka zalezi zindawo emkhunjini. Umkhumbi "Cosmonaut Yuri Gagarin" gumbi inikeza inala enkulu futhi zikhululekile kakhulu. Futhi, esikhundleni iwindi kukhona iwindi ukubukwa okukuvumela ukuthi zibabaza indawo kusukela induduzo ekamelweni lakho. On emphemeni main kukhona kumakhabheni olulodwa zonke Izinsiza. Lena indawo enhle kulabo luhamba wedwa. amakamelo Eduze kukhona inkudlwana, imibhede olulodwa ezimbili.
Lokhu kumakhabheni standard, okuyinto izivakashi isikhathi eside. kukhona izinketho mnandi kwi emphemeni ezisemqoka ezisetshenzisiwe. Cabin Class A + - Lesi sengezo ngobukhulu amakamelo double nazo zonke Izinsiza. Inketho ilungele labo uthanda yokuchitha isizungu ukhululekile. Uma umhlobiso esezingeni endlwaneni eyakhiwe ungenaso wanelisa, kuyafaneleka ukunaka ekilasini "Junior." Lena cishe ehhotela, ivulekile nazo zonke Izinsiza. Ngaphandle standard, kukhona izihlalo kanye air conditioning, okuwusizo kakhulu uma ukushisa okukhulu.
Kukhona kumakhabheni ngoba izigaba ezahlukene izivakashi. Ngesikhathi esifanayo, ngenketho ngisho uthobekile, uyokwazi basayikhumbula amaholide abo njengoba best. Ukuze ukholelwe ke, nje sibheke umkhumbi "Cosmonaut Yuri Gagarin". Photo ikhombisa ezimhlophe kathathu anesitezi uyathandeka, okuyinto lula ukuthi ube umhlobiso-albhamu nomndeni wakho.
Apholile enkulu lapha - junior, kakade kuchaziwe ngenhla. Igumbi Double inikeza ithuba ukuze anakekele umgibeli wesithathu, uma ingane ongazange attained ihlanganisa iminyaka eyishumi ubudala. Ukuze imindeni emikhulu ukhetho engcono kungaba amane okulala gumbi nazo zonke Izinsiza. Nazi isikhala ezimbili eziyisisekelo futhi ezengeziwe, ifriji futhi lezingubo, etafuleni eliseceleni kombhede. Ukubheka panel uzokwenza ukuhlala kwakho kujabulise nakakhulu.
Esikhathini Iminsalo umkhumbi has a kumakhabheni encane double nazo zonke Izinsiza. Ubukhulu azihileli semali ifenisha, ngakho eziphansi: kukhona embhedeni, ikhabethe futhi eliseceleni kombhede amatafula. izici fanekiso futhi aft emphemeni phakathi.
Izinketho isihambi isabelomali
Umkhumbi "Cosmonaut Yuri Gagarin" linikeza iholide ezingabizi futhi ngesikhathi esifanayo inqwaba lezimanga amnandi. Ikakhulukazi, ambalwa amathemba ukwenza uhambo kule liner okunethezeka imali nesizotha. Kungenzeka, ikakhulukazi uma ukhetha indlu nge zesimanje ngokwengxenye, eziningi zazo zitholakala kwi emphemeni phakathi. B1-non-class, elincane, eyenzelwe omunye izivakashi anemisila embhedeni, ikhabethe, etafuleni eliseceleni kombhede kanye echibini ngamanzi ashisayo.
A option efanayo kukhona futhi imibhangqwana. Lesi sigaba gumbi B2K, kabili, nge zesimanje esinqunyiwe. Uma uhambo nezingane, kufanele ukhethe gumbi embhedeni nge zesimanje esinqunyiwe. Ngalokhu embhedeni ilungiselelo ilondoloza isikhala, ukuvumela wonke umndeni ukuhlala kuyo indlu encane.
Izibuyekezo bhá lomkhumbi "Cosmonaut Yuri Gagarin" ngokuvamile kusekelwe abakhileyo kulezi apholile. Noma kunjalo, ngemva kwakho konke lokhu efulethini cishe yokuhlala. Ababili ikamelo double ikuvumela ukuba uthathe cruise induduzo Imininingwane. Okunethezeka - kuba gumbi ohamba phambili ku-liner, it ifakwe zika, eshaweni kanye yangasese. Amagumbi zihlukaniswe lokulala kanye negumbi lokuhlala zihlanganisa namafasitela amakhulu. Air conditioning uzokwenza uhambo ukhululekile ngo yimuphi sezulu. Apholile anemisila imibhede emibili olulodwa futhi umbhede usofa, lezingubo futhi eliseceleni kombhede amatafula. Kukhona-TV kanye ifriji.
Eduze ekilasini gumbi "suite", izimpawu e ukuthi aqukethe ekamelweni elilodwa. Ezinye izindaba zika-imishini kuyafana. Manje ungenza izinombolo ukukhetha futhi unqume ukuthi iziphi izindawo uzimisele ukuhamba.
Ngaphambi kokuqhubeka incazelo cruise, ngingathanda ukugxila kanjani bebona izivakashi ngokwabo emkhunjini "Cosmonaut Gagarin". Umkhumbi, ukubuyekezwa zazo zinhle ngempela, ke kusobala ukuthi kuyodingeka eziningi udumo. Yilokhu sikwazi ukulandelela, ehlaziya amazwana zezivakashi.
Esigigabeni sokuqala, ukuqaphela ukuthi liner amaphunga ngingekho ngokuphelele, ukuthi akuyona neze engavamile. Ayikho mustiness noma dampness, yonke indawo ihlanzekile. zangasese ezintsha, eshona ukucwazimula, okukuhle. Amanzi eshaweni uya kahle. I gumbi has yonke impahla yasendlini kudingekile, okuyinto zisesimweni esihle. Amafasitela evuliwe kanye ezilungisiwe, imisebenzi esiqandisini, nelineni kanye amathawula fresh futhi ihlanzekile.
Amandla - lena ngenye iphuzu elibalulekile izivakashi, ikakhulukazi liner. Zonke izibuyekezo usho okuhle umsebenzi chef. Ukudla yokudlela, ekudleni ingakhethwa. Kukhona njalo ukuzikhethela lokho ofuna ukukwenza inyama kanye nenhlanzi izitsha, salads fresh. Izingxenye ezinkulu futhi ezihlwabusayo kakhulu. Ibhulakufesi Kwamjabulisa, izivakashi uphiwa wokudla ne-yogurt, bagel nge ushizi noma amasosishi izithelo nesiphuzo.
Izikhangibavakashi kusukela Nizhny Novgorod, Yaroslavl kuyinto ukukhetha ekahle ngempelasonto. Kuyoqhubeka izinsuku ezimbili, okokuqala uzothola Cruises elithakazelisayo ke nokuhamba nemoto uhambo ezungeze idolobha. Yaroslavl - igugu wangempela esifundeni. amasonto Ngokubabazekayo futhi embankments kahle nge gazebos, iindawo ezimazombe ukubopha, ezitaladini amancane amathilomu ethokomele, umcibisholo ne nemithombo izimbali. Lo muzi nakanjani ukunqoba inhliziyo yakho, ngifuna buya lapha ngaphezu kwesikhathi esisodwa. Izikhangibavakashi abiza ruble mayelana 8,000, khuhlangene nokudla.
Kwabanye, yokubuka zezindela lasendulo - kungcono kuyisicefe, kodwa abanye - iphupho kweminyaka eminingi yokuphila. Uma awela esigabeni yokugcina, sincoma umzila masonto onke ngokusebenzisa Gorodets, Kostroma, Yaroslavl futhi Vologda, Gorica futhi Koprino. Mina wasibeka ngendlela ezokwenza enze kube nokwenzeka ukuba idlule izindawo ezinhle kakhulu. Esondela edolobhaneni Gorica, bekude ungabona izindonga yesigodlo, nako konke okuseduze - ukuthula nokuzola. Hhayi endaweni engcwele kuphela izivakashi. Imvelo uqobo amazing. Ngokwesibonelo, entabeni phambi kwakho, Maura, emthambekeni eseningizimu zazo kuhlala edlelweni izimila, ejwayelekile ye enyakatho ehlathini-emathafeni ka Karelia. izindawo ezinjalo eziningi, futhi ngayinye kuwo izonikezwa ngesikhathi esithile. Izindleko uhambo lwezinsuku eziyisithupha - ruble 17 000.
Kunezinye cruise umkhumbi "Cosmonaut Yuri Gagarin", kube kungekho kancane ezithakazelisayo izivakashi.
Enye ohambweni oluthakazelisayo kwezinsuku ezimbili, okuyinto surely ukujabulela wonke umndeni wakho we. On isikebhe ukhululekile ukuba nisuke Yaroslavl futhi ngosuku olulandelayo ukufika Uglich. Kunokuphishekela elinde ubunjalo amahle yokupaka endaweni ezithakazelisayo, i kwenkundla emangalisayo enhle ngemuva, futhi ukubona indawo izinkambo. umkhumbi Luhlelo "Cosmonaut Yuri Gagarin" wakhiwa ngendlela yokuthi kungaba ngokuphelele nesithukuthezi kanye. Izivakashi kufanele kuphela isikhathi ukulala yidlani ukudla kwenu kwasekuseni, njengoba kumanje enye ikholi uhambo yobuchopho. Uzothola i Uglich lasendulo ne eziningi izikhumbuzo bokwakha isonto, kanye Myshkin encane nge iminyuziyamu yabo ezithakazelisayo.
Izikhangibavakashi ukuze Kazan
Kokuthunyelwa isikebhe kusuka Yaroslavl, ngokuvakashela benzisa futhi Nizhny Novgorod, Makarov, Gorodets. Ngayinye yalezi izinto has umlando walo, okufanele nakanjani ukutshela mhlahlandlela. Isikhathi ukuvakasha - 6 izinsuku, izindleko - mayelana 13 000 ruble. Kazan kuwuhambo pearl. IVolga yidolobha elihle isikhathi eside nawe uzokhumbula zalo ezikhangayo. Uhambo kuhlanganisa evakashele ezibiyele kanye umbhoshongo Syuyumbike, Kul-Sharif Mosque, endlini abalimi kanye nezinye izinto eziningi ezikhangayo. City iyalumela, njengoba kubonakala lapha amasiko amabili, Russian nesiTatar.
Kufinyeta, singasho ukuthi "Cosmonaut Gagarin" - lena liner emangalisayo futhi ukhululekile ezonikeza izimo ukuphila kahle wonke umuntu. Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo zezivakashi, lokhu ngempela omunye okukhethwa best for travel phezu kwemifula yeRussia.
Credit Sikhungo inikeza amathuba amasha izicelo ukuze Diploma
UVeronika Kravchuk: "Kholwa yiNkosi ubuhle!"
Pityriasis rosea: amakhambi ukwelashwa abantu ngokuhlanganyela imithi yendabuko
Lithuanian cuisine kazwelonke: izici zokupheka best kanye nokubuyekeza
Kungani izibuko ethandwa kangaka ngaphandle diopters
Boeing isungule metal akhanya